Asa any ivelany :: Hojerena antsipiriany ny fifanarahan’ ny mpampiasa sy ny mpiasa • AoRaha
Asa any ivelany Hojerena antsipiriany ny fifanarahan’ ny mpampiasa sy ny mpiasa
Mbola misy ny fandefasana mpiasa any ivelany. Noraisin’ny minisiteran’ny Asam-panjakana sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy ny fepetra hisorohana ny gaboraraka sy ny olana amin’ny fandefasana ireo mpiasa malagasy ireo any am-pitan-dranomasina any. Hojerena amin’ny antsipiriany ny fifanarahana eo amin’ny mpampiasa sy ny mpiasa.
« Mipetraka foana ny fahafahan’ny tsirairay hiasa any ivelany, any amin’ireo firenena tsy iharan’ny fampiatoana nataon’ny fanjakana. Tsy malalaka toy ny teo aloha anefa ny fandefasana mpiasa fa hojerena manokana ny mikasika ny fifanarahan’ny roa tonta », hoy ny minisitra Ramampy Gisèle.
Midina ifotony manara-maso ireo olona manamboatra pasipaoro ny avy ao amin’ny Polisim-pirenena. Raha vantany vao mikasa ny handeha any amin’ireo firenena arabo, toa an’i Koweït, na Liban, ny vehivavy iray dia efa hanokafan’izy ireo fanadihadihana. Tsy latsa-danja ny fijerena ireo birao ahiana ho misy fikarakarana ny fandefasana mpiasa mankany ivelany miorina any an’elankelatrano. Efa tsy manao peta-drindrina intsony ny ankamaroany ankehitriny.
Tsiahivina fa betsaka ireo olona efa nampidirina am-ponja tamin’ity fandefasana mpiasa antsokosoko any ivelany ity.
Fisorohana ny lefakozatra :: Vitsy ireo ray aman-dreny mitondra ny zanany hatao vaksiny